Uncategorized | Radio Wadani News
Ra’iisul Wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Cali Khayre ayaa magacaabay guddi ka kooban golaha wasiirrada oo ka shaqeynaya aaska guddoomiyihii gobalka Banaadir, Eng. Cabdiraxmaan Cumar Cusmaan (Yariisow) oo ku geeriyooday Isbitaal kuyaala magaalada Dooxa ee dalka Qatar. Guddoomiyaha Guddiga Qaban-qaabada Aaska Qaran, ahna Ra’iisul Wasaare ku-xigeenka XFS, mudane Mahdi Maxamed Guuleed (Khadar), oo ku hadlaya magaca Ra’iisul Wasaaraha iyo ...
Magaalada Muqdisho waxaa goor dhow ku geeriyooday Maxamed Qanyare Afrax oo ka mid ahaa Siyaasiyiinta Soomaaliyeed, kuwooda sidda weyn looga yaqaano Soomaaliya. Qanyare ayaa horay usoo noqday Xildhibaan, Wasiir, waxaana uu mar ka mid ahaa xubnihii dagaalka kula jiray Maxaakiimta. Qanyare ayaa ku geeriyooday Isbitaalka Digfeer ee Muqdisho oo maalmihii ugu dambeeyay uu ku xanuusanayay, waxaana xilligaan uu ahaa nin ...
Madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa markii ugu horeysay waxaa uu ka hadlay Go’aankii Sacuudiga uu ka qaatay Xoolaha looga dhoofiyo Soomaaliland,kaas oo ahaa inay fasax kasoo qaataan Dowladda Federaalka Soomaaliya. Waxaa uu sheegay Muuse Biixi in aan la aqbali karin shuruudaha ay dawladda Sucuudigu ku xiray dhoofka xoolaha Somaliland, isaga oo sheegay in ganacsatada reer Somaliland ee xoolaha dhoofiyaa ...
Wafdi uu hogaaminaayo Madaxweynhaa Dowlad Goboleedka Koonfur galbeed C/Casiis Xasan Maxamed lafta-gareen oo uu qeyb ka yahay Gudoomiyaha Baarlamanka koonfur Galbeed C/qaadir Shariif Sheekhuna Maye ,ayaa Maanta Dib ugu laabtey Magaalaada Baydhabo,waxana Garoonka Diyaradaha Magaalada Baydhabo Ku soo dhaweyay ,kusimaha Madaxweynaha kgs ahna Gudoomiye kuxigeenka 1-aad Ee Baarlamanka kg ,Wasiiro ,Xildhibaano,Odayaasha Dhaqanka ,Saraakiisha Ciidamada Qeybahooda kala Duwan iyo Ururada Bulshada ...
SAWIRO:-Madaxweyne Waare oo kulan la qaatay Saraakiisha Ciidamada AMISOM
Madaxweynaha Dowlad goboleedka Hir-Shabelele Maxamed Cabdi Waare ayaa kulan Albaabada u xiran yihiin Beledweyne kula qaatay Saraakiisha Ciidamada Midowga Africa ee AMISOM ee ka howlgalla Hir-Shabeelle. Kulanka ayaa ahaa mid looga hadlayay amniga Guud ee Gobolka Hiiraan iyo in la iska kaashado xoojinta xaqiijinta amniga iyo ka hortaga wax kasta oo lidi ku ah xasiloonida. Kulanka ayaa waxaa goob joog ...
Madaxweyne Xaaf oo sheegay in madaxda Dowladda dhexe ay dhibaato ku yihiin Galmudug iyo Jubbaland
RWN.Madaxwaynaha maamulka Galmudug Axmed Ducaale Geele Xaaf ayaa xalay ka qayb galay Kulan ay soo agaasimeen Jaaliyadda Deegaanada Galmudug ka soo jeeda ee ku nool Magaalada Nairobi. Kulanka ayaa sidoo kale waxaa loogu jawaabayay hadalkii ka soo yeeray madaxwayanaha Dowladda Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo, kaasi oo ku aadanaa in madaxwaynaha Galmudug uu diiday Daawada Xalka u Noqon karta Galmudug. Madaxwayne ...
Daawo duqaymaha ay Israa’iil ka gaysatay Qaza
RWN.Israa’iil ayaa fulisay weerarro ay ku bartilmaameed sanayso goobo ay Xamaas ku leedahay marinka Qaza, saacado ka dib markii gantaal uu ku soo dhacay guri ku yaalla waqooyiga Tel Aviv. Ciidammada Difaaca ee Israa’iil ayaa sheegay in bartilmaameedka ay weerareen ay ka mid ahaayeen xafiika madaxa siyaasadda ee Xamaas iyo xarunta sirdoonka ee ururkaas. Wasaaradda caafimaadka ee Qaza ayaa sheegtay ...
Ra’iisulwasaare sheegay in uu carqaladayn kala kulmay diyaaradaha dagaalka ee Turkiga
RWN.Ra’iisulwasaaraha Giriigga ayaa sheegay in isaga oo diyaaraddiisa saaran oo u dabaal dagaya maalinta xoriyadda uu “carqaladayn kala kulmay” diyaaradaha dagaalka ee Turkiga. Alexis Tsipras ayaa sheegay in diyaaraddiisa lagu qasbay “in ay xidaaraysato” ka dib markii diyaaradaha dagaalka ee Turkigu ay Isniintii galeen hawada Giriigga. Ra’iisulwasaaraha ayaa Turkiga ku eedeeyay “ficil axmuqnimo ah oo aan macno ku fadhiyin”. Laamaha ...
AKHRISO: Musharaxiinta Koonfur Galbeed oo soo jeediyay in dib loo dhigo doorashadda
Qaar ka mid ah Musharaxiinta xilka Madaxtinimada maamulka Koonfur Galbeed ayaa soo dhaweeyay iscasilaadii Madaxweynaha Koonfur Galbeed Shariif Xasan Sheekh Aadan, waxaana ay soo jeediyeen in la dardargaliyo howlaha Doorashadda maamulka Koonfur Galbeed. Musharaxiinta xilka Madaxtinimadda maamulka Koonfur Galbeed ayaa soo jeediyay in ay muhiim tahay in dib loo dhigo doorashadda Madaxtinimadda maamulka Koonfur Galbeed ka dib markii ay sheegeen ...
Ka dib markii dhawaan dowladda Soomaaliya ay ku dhawaaqday in ay sameysay Manhaj cusub looga tala galay in laga hirgaliyo dugsiyadda Waxbarashadda ee Soomaaliya ayaa arintaasi waxaa digniin kasoo saaray Al-Shabaab. Sheekh Cali Dheere Afhayeenka Al-Shabaab ayaa sheegay in Hey’adda Qaramada Midoobey u qaabilsan Waxbarashada ee UNESCO ay faafineyso manhaj Waxbarasho oo khaldan, kaasoo ka ka hor imaanaya Diinta Islaamka, ...